Isaya 24 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jehovha achabvisa zvinhu zvese munyika (1-23)
Jehovha ava Mambo muZiyoni (23)
24 Inzwai! Jehovha ari kubvisa zvinhu zvese munyika* achiisiya isina chinhu.+ Anoipidigura+ oparadzira vagari vayo.+ 2 Vese vachaitirwa zvakafanana: Vanhu uyewo mupristi,Muranda natenzi wake,Muranda natenzikadzi wake,Anotenga neanotengesa,Ari mubhizimisi rekupa zvikwereti neanopiwa chikwereti,Akakweretesa neakakwereta.+ 3 Nyika ichabviswa zvinhu zvese zviri mairi;Ichapambwa zvinhu zvese,+Nekuti Jehovha ataura shoko iri. 4 Nyika iri kuchema;*+ iri kuparara. Nyika iri kusvava; iri kupera basa. Vanhu vanokudzwa vemunyika yacho vapera simba. 5 Nyika yasvibiswa nevagari vayo,+Nekuti vatyora mitemo,+Vachinja murau,+Uye vaputsa sungano inogara kwenguva refu.*+ 6 Ndokusaka kutuka kuchiparadza nyika yacho,+Uye vaya vanogara mairi vachinzi vane mhosva. Ndokusaka vagari vemunyika yacho vava vashoma,Uye pasara varume vashomanana.+ 7 Waini itsva iri kuchema,* muzambiringa uri kuoma,+Uye vaya vese vane mwoyo iri kufara vari kugomera.+ 8 Mufaro wekurira kwematambureni wapera;Ruzha rwevaya vanoita mafaro akanyanyisa rwaguma;Kurira kunonakidza kwerudimbwa kwapera.+ 9 Vanonwa waini pasina rwiyo,Uye doro ravari kunwa riri kuvava. 10 Guta rekusiyiwa, raputsika;+Dzimba dzese dzavharwa kuti parege kuva neanopinda. 11 Vanochemera waini mumigwagwa. Kufara kwese kwanyangarika;Mufaro wenyika yacho wapera.+ 12 Guta rasiyiwa angova matongo;Gedhi rapwanyiwa rikasara rangova murwi.+ 13 Nekuti izvi ndizvo zvazvichange zvakaita munyika yacho pakati pemarudzi: Sezvinoitika panozunzwa muorivhi,+Semazambiringa mashoma anosara kana kukohwa kwapera.+ 14 Vachakwidza inzwi ravo,Vachashevedzera vachifara. Vachazivisa nezveukuru hwaJehovha vari kugungwa.*+ 15 Ndokusaka vachakudza Jehovha vari munharaunda yechiedza;*+Vachakudza zita raJehovha Mwari waIsraeri muzvitsuwa zvegungwa.+ 16 Tiri kunzwa nziyo kumigumo yenyika, dzichiti: “Iye Akarurama ngaakudzwe!”*+ Asi ndinoti: “Ndiri kuperezeka, ndiri kuperezeka! Ndine nhamo! Vanyengeri vanyengera;Neunyengeri hwavo, vanyengeri varatidza unyengeri.”+ 17 Kutya kukuru nemakomba nezviteyeso zvakakumirira, iwe mugari wemunyika.+ 18 Wese anenge achitiza ruzha runotyisa achawira mugomba,Uye wese anenge achibuda mugomba achabatwa nechiteyeso.+ Nekuti magedhi emvura ari kumusoro achavhurwa,Uye nheyo dzenyika dzichazununguka. 19 Nyika yatsemuka;Nyika yazununguswa;Nyika yagwinha-gwinha zvine simba.+ 20 Nyika iri kudzedzereka sechidhakwa,Uye iri kuzunguzika sekaimba kari kuzunguzwa nemhepo. Kukanganisa kwayo kuri kuiremera chaizvo,+Uye ichawa, zvekuti haizosimukizve. 21 Zuva iroro Jehovha achafunga nezvekutonga uto rekumusoroUye madzimambo enyika ari panyika. 22 Uye vachaunganidzwaSevasungwa vakaunganidzwa mugomba,Uye vachavharirwa mujeri repasi;Papera mazuva mazhinji, vachaonekwa kuti voitwa sei. 23 Jenaguru richatsverudzwa,Uye zuva rinopenya richanyara,+Nekuti Jehovha wemauto ava Mambo+ muGomo reZiyoni+ nemuJerusarema,Achibwinya pamberi pevakuru vevanhu vake.*+
^ Kana kuti “panyika.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “iri kuoma.”
^ Kana kuti “sungano yekare.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “iri kupera.”
^ Kana kuti “kumavirira.”
^ Kana kuti “kumabvazuva.”
^ Kana kuti “ngaashongedzwe.”
^ ChiHeb., “pamberi pevakuru vake.”